Fitsidihana Ireo Bilaogy Libiana · Global Voices teny Malagasy
Fitsidihana Ireo Bilaogy Libiana
Voadika ny 15 Aogositra 2017 17:07 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, English
Mitohy indray ny adihevitra tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny AngloLibyan izay nitondra ny lohahevitra mikasika ireo ankizy Libiana voan'ny SIDA toy ny sampan'ilay adihevitra tamin'ny herinandro lasa nikasika ireo ankizy Libiana voan'ny SIDA.
Tamin'ity indray mitoraka ity, nasongadin'ny Anglo Libyan ny fisianà fepetra mitanila sy ny mety hisian'ny fahadisoan'ny fitsaràna avy amin'ny lafiny Bolgara. Asehon'ny raharahan'i Michael Shields izany.
“Michael dia tovolahy Anglisy iray izay, tamin'ny taona 2005, nampangain'ireo manampahefana Bolgara ho nikasa hamono lehilahy Bolgara iray nahazo ratra mafy teo amin'ny lohany. I Michael Sheilds izay 18 taona monja moa tamin'izany dia natory tamin'ny fotoana nitrangan'ny heloka araka ny nohamarinin'ireo vavolombelona, kanefa dia mbola nosamborin'ny mpitandro filaminana ihany izy tao amin'ny trano fandraisambahiny nitoerany, nomelohina tamin'ilay heloka niampangana azy ary nosaziana 15 taona an-tranomaizina anatinà fonja Bolgara, taorian'ny niaiken'i Graham Sankey, lehilahy Anglisy iray hafa voampanga, ho nanao ilay heloka ary nanambara fa efa nivonona hiara-hiasa amin'ireo Bolgara ka tokony havotsotra i Michael Shields. Mahagaga fa tsy nanaiky io fiaiken-keloka io ireo Bolgara ary nanizingizina izy ireo fa manana ny meloka.”
Amin'ny ankapobeny, aza mitoraka vato ny hafa raha vita fitaratra ny varavaranao.
Mitaraina kosa i A.Adam avy ao amin'ny Flying Birds etsy an-kilany mikasika ny tolotry ny LTT izay toa iharan'ny hadisoana maro tato ho ato.
“Hadisoana 691: Tsy afaka manorina fifandraisana amin'ny Tambajotra avy any lavitra ny solosaina izay ampiasainao. Amarino ny tenimiafinao, ary avereno indray avy eo. Nanao izay afako ihany aho nanamarina ny solonanarako sy ny tenimiafina fa tsy nisy nilàna azy daholo izay fanandramana nataoko rehetra”.
Toa misy fomba ahafahana mamerina indray ny tolotra aorian'ny ipoiran'io hafatra io na eo aza ny fihetsika tsy misy fanampiana nasehon'ilay mpiasa nifandraisany. Jereo ny lahatsorany sy ny zavatra nolazain'ireo mpaneho hevitra ahafantaranao misimisy kokoa.
Nandefa ireo sarin'ny fitsangatsanganana nokarakarain'ny reniny sy ny nenintoany vao haingana ho an'ireto zanany mba ahafantarany an'i Libia (Tripoli tamin'ity indray mitoraka ity) i Maysoon.
“Manana hevitra hafa mihitsy i mama ho an'ireo nandao an'i Libia, nipetraka tany ivelany, izay miverina ankehitriny ka lasa diso arovan'ny ray aman-dreniny loatra, manomana zavatra ho azy ireo izy, ary eny, natao ho an'ny ankizivavy ihany, hita fa toa tsy miatrika karazana olana toy izany ny ankizilahy (hilazàna vaovao ihany ianareo izay te handray anjara).”
Tsindrio eto raha hijery ny tatitra nataony.
Lohahevitra iray hafa mahaliana izay tsikaritro nitranga tao Libia ary nahafaly ahy ny niresahan'ny bilaogera Libyano azy dia ny ‘hetsipanentanana mba tsy ampiasàna ny harona plastika any amin'ny toeram-pivarotana mofo’.
“Faly aho tamin'iny andro iny raha tao amin'ny fivarota-mofo teo akaikin'ny tranonay ka nahita fa efa nampiharina ilay fanentanana vaovao manohitra ny fampiasàna harona plastika. Tantananan'ny Manampahefana Ambony Misahana ny Tontolo Iainana miaraka amin'ny Sekreteran'ny Fahasalamana sy ny Tontolo Iainana io, kendrena mba hanatsaharana ny fampiasàna harona plastika any amin'ireo toerana fivarota-mofo ary hanoloana azy ireo amin'ny harona taratasy na zavatra hafa afaka atao solony. Hametra ny homamiadana ateraky ny harona plastika amin'ny sakafo izany, indrindra ny mofo mamay, ary hiezaka ny hanena ny isan'ireo harona plastika ampiasaina isan'andro izay mahatonga olana roa eo amin'ny tontolo iainana”
Nanome domberina momba ny zavatra samihafa niainany tany amin'ireo fivarota-mofo sy ny fomban'ny sasany amin'izy ireny mbola mampiasa ilay ‘guffa’ Libiana nentin-drazana na harona hividianana mofo ireo mpamaky.
Mandritra izany, nanao lahatsoratra i Highlander iresahany mikasika ny tobin'onjampeo tian'ny rehetra indrindra any Libia, antsoina hoe Allibya FM, sy ireo karazanà fandaharana alefany, isan'izany ‘Ry nenitoa fijaliana’. Lohahevitra mafana miavaka iray izay nisarika mpamaly sy mpiantso maro, ary nahenoany valiny tena nahavariana azy ny nikasika ny olanà tovolahy iray, izany hoe hihaino ireo ray aman-dreniny ka hanambady ny vady navelan'ny rahalahiny nodimandry sa hanambady ny olon-tiany?
Tena mampihetsi-po izany, mihainoa hatrany (tsy misy sarinteny :P) hanarahana ireo Libiana bilaogera sy tantara maro hafa amin'ny herinandro manaraka.
5 ora izayBahrain
2 herinandro izaySyria